थाह पाउनहोस्, पानी कति पिउने? - Everest Dainik - News from Nepal
थाह पाउनहोस्, पानी कति पिउने?
काठमाडौं । पानी कति पिउने भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा आएका छन्। कतिपय सक्दो पानी पिउनुपर्छ भन्छन्, कोही दैनिक तीन लिटर पानी पिउनुपर्छ भन्छन्। तापनि पानी कसरी र कति पिउनुपर्छ भन्नेबारे सही मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन। अचेल मानिस पर्याप्त पानी पउँछन्। तर पानी कति पिउने भन्नेबारे सही मान्यता छैन।
याे पनि पढ्नुस देशभर बदली, हल्का वर्षा
कतिपय धेरै पानी पिउनाले छाला चम्किलो बन्ने र कतिपयले तौल घट्ने सुझाब दिन्छन्। विज्ञहरु हरेक दिन कम्तीमा दुई सय ४० मिलिलिटर पानी पिउन सुझाब दिन्छन्। बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिसले एडवाइजरीले दैनिक ६ देखि ८ गिलास पानी पिउनु उचित हुने सुझाएको छ।
याे पनि पढ्नुस मेलम्चीको १७ करोड लिटर पानी दुई महिनाभित्र राजधानी आउँदै
यसमा अन्य तरल पदार्थ तथा खाद्यान्नबाट निस्कने पानी पनि जोडिएको छ। हामी शरीरलाई चाहिएको भन्दा बढी पानी पिइरहेका हुन्छौँ। बेलायती एक विज्ञ भन्छन् मानिसले दैनिक धेरैमा दुई लिटर पानी पिउन आवश्यक छ। यो खबर नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस एक घर एक धारा बनाउने नीति छः खानेपानी मन्त्री